Ejegharị ejegharị na A Disability Na Europe Mere Easy | Save A Train
Home > Travel Europe > Ejegharị ejegharị na A Disability Na Europe Mere Easy
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 05/06/2020)
Gịnị mere anyị ji na-eme njem ụgbọ okporo ígwè? Train njem na-atụrụ ndụ, uru na awade a na-elekọta mmadụ akụkụ ahụ ndị ọzọ iga ụzọ nnọọ ike dakọtara. Otú ọ dị, ejegharị ejegharị na a nkwarụ ghara imerụ ụfọdụ. Nke a apụtaghị na ị na-enweghị ike na-enwe na fun, ezie. Isiokwu a na-enye ụfọdụ bụ isi ebe na ị chọrọ ịtụle mgbe eme atụmatụ gị ụgbọ okporo ígwè njem ka-ejegharị ejegharị na a nkwarụ na Europe bụ obere nrụgide.
Mgbe e nwere N'ezie, ụfọdụ accessibility nsogbu, bụ isi bụ eziokwu bụ na ihe nnyocha ị na-eme, ihe ịgụ na fun gị na njem ga-! Ọmụmaatụ; Ị maara na Herculaneum si mkpọmkpọ ebe bụ fọrọ nke nta yiri ka Pompeii, ma na-anọ n'ígwè ndị ngwọrọ-enyi na enyi? Na na ụgbọ njem na nkwarụ na-adịghị na- “inyinya-ibu ụzọ” elu na ọnụ ọnụ ugwu mgbe ịga àgwàetiti Gris Santorini? Gị ezumike adịghị mkpa ka a na-alụ - eme gị rụọ n'ụlọ na gị na njem nwere ike jupụtara n'ụzọ zuru ezu inweta hotel ụlọ, inweta ụzọ gasị n'etiti inweta njem nleta nkiri, na ebube inweta njem ahụmahụ.
Nke Train na-na Save-A-Train ọ bụrụ na ị na-ejegharị na a nkwarụ?
Ọ bụrụ na i nwere otutu nhọrọ dị ka ị na- (mba ụfọdụ nwere nanị otu okporo ígwè usoro), agbalị họrọ ụgbọelu na awade kasị ọrụ ahaziri gị Njegharị na a nkwarụ mkpa. Ya bụ; Ebi ebi aka na inweta sleeper ụgbọala. Ụlọ mposi ga-abụ nnukwu iji nabata gị na oche nkwagharị na ihe iduga ma ọ bụ na-eje ozi. Dị ka mgbe niile, ịjụ dị ka ọtụtụ ajụjụ ndị dị ka i nwere ike tupu ka ezere ịtụnanya!
Eji enyere ndụ aka na Services
Special Njegharị na a nkwarụ ọrụ nwere ike ịdị iche site na otu mpaghara ọzọ, dabere na a ọnụ ọgụgụ nke criterion; ụgbọala na gị akpan akpan ụgbọ okporo, ụlọ ọrụ na ndị dị iche iche ụgbọ tinyere gị ụzọ na ọbụna gị ụgbọelu iwu na accessibility.
Cologne na Brussels Ụgbọ oloko
Gụọ Ticket gị ma Mara whilezọ Gị ka ị na-ejegharị na nkwarụ
Nyochaa gị tiketi na njegasi ọma ozugbo ị natara ya na. Gbaa mbọ hụ na ị na-ala na ya atumatu na ndokwa nke mere na ị na-adịghị anya na gị dị iche iche-akwụsịtụ (karịsịa mgbe ejegharị ejegharị esenidụt).
Ramp na arọ Limits
Inweta na gbanyụọ ụgbọ okporo ígwè bụ doro anya na akụkụ dị mkpa nke njem. eme ka n'aka gị ọpụpụ na mbata ụgbọ na-onwem na elu-larịị nyiwe ma ọ bụ oche nkwagharị lifts. Nke a ga-eme ka ọ nnọọ mfe banye na anya gị ụgbọ okporo ígwè mgbe ejegharị na a nkwarụ.
Milan ka Pompei Ụgbọ oloko
Florence na Pompei Ụgbọ oloko
Salerno na Pompeii Ụgbọ oloko
Akpa ọzọ mgbe ị na-eme njem nkwarụ
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ebu ga-eme ike ha nabata ndị mmadụ na-eme njem na a nkwarụ na ndị nwere mmezi ibu ha nwere ike ịchọ (e.g. ngwọrọ, oxygen tankị, wdg). Ọ bụrụ na ị maara na ị na-aga mkpa ọzọ ibu chọrọ, ka gị ụgbọelu ụzọ mara.
Mgbe ị na-abata
Nọrọ na ihe ndị kasị mfe akụkụ nke obodo. Nke a bụ otu n'ime ihe kacha siere akụkụ nke na-eme atụmatụ ụgbọ oloko gị njem mgbe na-ejegharị na a nkwarụ. Ị nwere ike hụrụ oké inweta hotel, ma ihe ị ga-ahụ mgbe ị na-eje ije / tụgharịa n'ihu ọnụ ụzọ? Enwere ugwu na steepụ niile ntụziaka? Ị ga-enwe ka tụgharịa cobblestones? Enwere inweta ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso? Ọ dị oké mkpa iji chọpụta hotel obi. Ị nwere ike iji Google Maps Street View na-nkịtị nke ala, mgbe Email na hotel na gị ajụjụ.
Na niile admin si ụzọ, na-echeta na-oge iji zuru ike na-enwe njem. Were oge ụfọdụ izute gị njem ibe, na-ele anya na windo, ma ọ bụ nanị ga-efu ruo nwa oge ka unu na-eme njem na-aga ka ọtụtụ ndị na-arahụ n'ihu.
Ị nwere ike akwụkwọ gị ụgbọ oloko tiketi n'etiti Kasị ụgbọ oloko na Europe on Zọpụta-A-Train ka fọrọ nke nta ọ bụla na-aga kpọọrọ n'elu 3 nkeji, na ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè udu na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị?, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/traveling-disability-europe/- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#nkwarụ #ngwọrọ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem traveltips